အမှန်အကန် ရောင်းပါပြီ ခင်ဗျ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » အမှန်အကန် ရောင်းပါပြီ ခင်ဗျ
အမှန်အကန် ရောင်းပါပြီ ခင်ဗျ
Posted by မောင် ပေ on Apr 11, 2013 in Creative Writing, My Dear Diary |9comments
ငါ့မလဲ နက်ဖန် ရိပ်သာဝင်ရတော့မယ့်အတူ ၊ ဒီည အမူးသွားမသောက်ခင် ၊ ငါ့ရဲ့ သင်္ကြန်ဈေးရောင်းဇါတ်လမ်းလေးကို ဒီညအပြီး ပြောခဲ့မယ်ကွာ ။…
“ ဟေ့ရောင်…ဘာလဲ မင်းက ပုလင်းလေးနဲ့ လာတာလား ၊ နေဦးကွာ ၊ အခုမှ ထမင်းစားပြီးခါစဆိုတော့ ငါ သောက်လို့ မရသေးဘူးကွ ”
အော် ငါ့သင်္ကြန် ရှေ့ ဇါတ်လမ်း ၂ပုဒ်ကတော့ ဒါတွေပါ
လူကြီးတွေ လူငယ်တွေကို လမ်းညွှန်ဆုံးမလေ့ရှိတဲ့ စကားတွေထဲ မှာ ၊ သူငယ်ချင်းအချင်းချင်း စုပေါင်းစပ်ပေါင်း စီးပွားမလုပ်ရဘူး ဆိုတာ ပါတယ်ကွ ။
ဘာလို့ လဲ လို့ ပြန်မေးရင် ၊ သူငယ်ချင်း အချင်းချင်း စီးပွားအတူတူလုပ်ကြတဲ့ အခါ ၊ နောက်ပိုင်းကြ သူသာတယ် ၊ ငါနာတယ် ဆိုပြီး စိတ်ဝမ်းကွဲလာပြီး အခင်အမင်ပါ ပျက်သွားတတ်ကြလို့ တဲ့ ။
ငါ နဲ့မောင်အောင် နဲ့ ပေါင်းလုပ်မယ့် သင်္ကြန်ဈေးရောင်းဖို့ ကတော့ ၊ ငါတို့ လဲ အဲဒီ့စကားကို ကြားခဲ့ဖူးတာပဲကွ ။
ဆိုတော့က ၊ အစကတော့ ပြုံးတပျော်ပျော် နောက်ကြတော့မှ အခင်အမင်မပျက်ရအောင် ၊ စသဘောမတူခင်ကတဲက ဒီလို ပြောခဲ့ကြတယ်ကွ ။
“ ဒီသင်္ကြန်ရက်အတွင်း ဈေးရောင်းတာ ၊ မြတ်တယ်လို့ တော့ လူတော်တော်များများ ပြောကြတယ် ။ ငါတို့ က အခုမှ စရောင်းကြမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် မြတ်ချင်မှလဲ မြတ်မယ် ၊ ရှုံးချင်လဲ ရှုံးမယ် ။
မြတ်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့ …
ရှုံးရင် အတွေ့ အကြုံရတယ် လို့ သဘောထားကြမယ် ”
နောက်ပြီး ငါ နဲ့ မောင်အောင် တို့ ဈေးရောင်းမှာ ကို လုပ်ကူဖို့ ၊ ဝိုင်းဝန်းပေးဖို့ ၊ လူအကူ ခေါ်တဲ့နေရာမှာ ၊ မောင်အောင့် မိန်းမ ၊ မောင်အောင့်အဒေါ် ရယ် ငါ့အသိ ကလေးမလေးနှစ်ယောက်ရယ် ၊ ငါ့တပည့်၉တန်းကျောင်းသားလေးတစ်ယောက်ရယ်ပေါ့ ။
သူရို့ ကို ဘယ်ရွေ့ ဘယ်မျှ ပေးမယ်ဆိုပြီး အကူအညီတောင်းတာတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့ကွာ ။
ကူညီပါဆိုပြီး မေတ္တာရပ်ခံတဲ့သဘောပေါ့ ။ သူရို့ ကလဲ ၊ ငွေအတွက်မဟုတ်ပဲ ၊ ခင်မင်မှု နဲ့ ပေါ့ ။
မောင်အောင့် မိန်းမကတော့ သူ့ ယောက်ျား လုပ်တာဆိုတော့ လိုက်ကူတဲ့သဘောပေါ့ ။
ရောင်းကြေးငွေကိုတော့ မနေ့ ညက ငါပြောခဲ့သလိုပဲ ၊ ငါနဲ့ မောင်အောင်ပဲ အိတ်တစ်လုံးထဲ စုထည့်ကြမယ်ပေါ့ကွာ ။ ဈေးဝယ်ထွက်ဖို့ ကိစ္စလဲ အစကတဲက မောင်အောင်နဲ့ ငါပဲ ထွက်ခဲ့ကြတာဆိုတော့ ၊ တခြားလိုအပ်တဲ့ အသေးအမွှားလေးတွေလောက်ပဲ မောင်အောင့် မိန်းမ နဲ့ မောင်အောင့်အဒေါ်တို့ ကို ကူညီခိုင်းလိုက်တော့တာပေါ့ ။
ဒီလိုနဲ့ သင်္ကြန်အကြိုနေ့ မနက်၉နာရီလောက်ကြတော့ မောင်အောင့်အိမ်မှာ ငါတို့ ဈေးရောင်းမယ့် အဖွဲ့ သားတွေ စုံပြီပေါ့ ။ ငါတို့ ကို ကြိုပို့ လုပ်ပေးမယ့်ကားက ၉နာရီခွဲလောက်ရောက်လာတာနဲ့ ငါတို့ လဲ မဏ္ဍပ်ကို ချီတက်လာကြတယ် ။
ပထမဆုံး အကြိုနေ့ ဖြစ်တာမို့၊ ဆန်တစ်ပြည်ချက်လောက်ကြော်ထားတာ နဲ့ ကြာဇံကြော်တစ်ဒယ်လောက်ပဲ ပြင်လာခဲ့တာကွ ။
ကျန်တဲ့ရောင်းမယ့် သောက်စရာတွေနဲ့ ဘီယာစည်တွေကတော့ မဏ္ဍပ်မှာ ပို့ ထားပြီးပြီပေါ့ ။
မောင်အောင် က မဏ္ဍပ်ကို ဆိုင်ကယ်နဲ့ လိုက်လာပြီး ၊ ငါတို့ က ကားနဲ့ အရင်ရောက်လာခဲ့တယ် ။
မဏ္ဍပ်ရောက်တော့ မနက်၁၀နာရီကျော်ကျော်လေး ရှိသေးတယ် ။ လူကတော်တော်စည်နေပြီကွ ။
တို့ မြို့ က မဏ္ဍပ်တော်တော်များများရဲ့ ထုံးစံက အကြိုနေ့ ဆိုရင် ဖရီးပေးတက်တာကြောင့်လဲ ပါမှာပေါ့ကွာ ။ အကြိုနေ့ ဖရီးပေးတက်တယ်ဆိုတာကလဲ ၊ မဏ္ဍပ်အော်ဂန်နိုက်ဇာ တွေ ရဲ့ ပရိုမိုးရှင်း တစ်မျိုးပဲပေါ့ကွာ ။
ရေကတော့ အကြိုနေ့ ညနေ မြို့ တော်ဝန်မဏ္ဍပ်က ဖွင့်ပွဲလုပ်ပြီးမှ ပက်ခွင့်ရမှာ ဆိုပေမယ့် ၊ ဖရောဘီးနှိုက်တတ်တဲ့ လူငယ်တွေကတော့ မနက်ကတဲက ဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့ ရောက်နေကြတာကလား ။ မဏ္ဍပ်မှာတော့ ဒစ်စကိုတွေ အီလက်ထရိုတွေ အကျယ်ကြီး ဖွင့်ထားတာပေါ့ကွာ ။
ငါတို့ အဖွဲ့ မဏ္ဍပ်ရောက်တာနဲ့ ပါလာတဲ့ ပစ္စည်းတွေချ ၊ ကိုယ့်ဈေးရောင်းရမယ့်နေရာလေးမှာ စားပွဲခုံ၃ခုံပေါ် ရောင်းမယ့် ပစ္စည်းလေးတွေ ၊ အချိုရည်ဘူး ဘီယာပုလင်း ဝိုင်ပုလင်းလေးတွေခင်းကြတာပေါ့ကွာ ။ ကားသမားကိုတော့ ညနေကြမှ ဖုန်းဆက်ခေါ်မယ်ပြောပြီး ပြန်လွှတ်ရတာပေါ့ ။
စည်ဘီယာရုံးကို ဖုန်းဆက်ပြီး ၊ စည်ဘီယာကို မည်သို့ မည်ပုံ ငဲ့ရမလဲ ဆိုတာ လာပြပေးဖို့ ခေါ်ရတယ်ကွ ။
ငါတို့ ဈေးဆိုင်လေးခင်းကျင်းပြီးတာနဲ့ တပြိုင်နက် ၊ မဏ္ဍပ်ရောက်နေတဲ့ ချာတိတ်အဖွဲ့ က စလာ ဈေးဦးဖောက်တော့တာပဲ ငါ့ကောင်ရေ ။
ငါတို့ မှာ ရောင်းဖို့ ဘာတွေစီစဉ်ထားလဲ ဆိုရင်
ဝီစကီ ပုလင်း ၆ပက်ပြား ၊ ၄ပက်ပြား ၊ ၂ပက်ဘူးသေး
ထမင်းကြော် (အသားမပါ ၊ မုံလာဥနီ ပန်းမုံလာ အသီးအနှံတွေနဲ့ ကြော်ထားတာ)
ကြက်အူချောင်းကြော် ကို ဒုတ်နဲ့ ထိုးထားတဲ့အကင်
ပင်လယ်စာတွေကို ကြော်ထားပြီး ဒုတ်နဲ့ ထိုးထားတဲ့အကင်
ကြက်ဖင်ဆီဖူး အတုံးလေးတွေကို ကြော်ထားပြီး ဒုတ်နဲ့ ထိုးထားတဲ့အကင်
ယိုးဒယားကလာတဲ့ အရက်ဘီယာနဲ့ တွဲမြည်းလို့ ကောင်းတဲ့ မုန့် ထုပ်လေးတွေပေါ့ကွာ ။
စည်ဘီယာကတော့ ရုံးကလူ လာမပြသေးလို့ ရောင်းလို့ မရသေးဘူးပေါ့ ။
ချာတိတ်အဖွဲ့ က လာအားပေးဆိုလဲ ၊ အချိန်က နေ့ လည် ၁၁နာရီနားကပ်ပြီကိုးကွ ။ ဆာကြရှာမှာပေါ့ ။ မဏ္ဍပ်က အကြိုနေ့ ဖရီးပေးတက်ပေမယ့် ၊ ဖရီးဆိုတော့ အကျွေးအမွေးအစီအစဉ် မပါဘူးပေါ့ ။
ချာတိတ်တွေက ထမင်းကြော် ၊ ကြာဇံကြော်တွေကို ကြက်ဥကြော်နဲ့ တွဲအားပေးသွားတယ်ကွ ။
အဲ့ချာတိတ်အဖွဲ့ စအားပေးပြီးတာနဲ့ ၊ နောက်ထပ်လဲ တစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက် အချိုရည်လေးဝယ်လိုက် ၊ စားစရာလေးဝယ်လိုက်နဲ့ အလုပ် ဆက်တိုက်ဖြစ်တော့တာပဲ ။
အဲ့ချိန်မှာ ဘီယာရုံးကလူ ရောက်လာပြီး ၊ စည်ကို မည်သို့ မည်ပုံ ငဲ့ရမယ်ဆိုတာ သင်ပြပေးသွားတယ်ကွ ။ စည်ဘီယာကို အေးနေဖို့ ဆိုရင် စည်ငဲ့မယ့် ဂေါက်ထွက်တဲ့ ရေခဲပုံးကို ရေခဲ မပြတ်ဖို့ လိုတယ်တဲ့ ။ ဒါနဲ့ အနီးဆုံးမှာရှိတဲ့ ရေခဲရောင်းတဲ့ဆီ ပြေးပြီး ရေခဲသွားမှာရတယ် ။ ရေခဲ အကြမ်းခဲ့တွေပေါ့ကွာ ။ ပေါင်(အလေးချိန်) နဲ့ ဝယ်ရတာကွ ။
ရေခဲ အကြမ်းခဲဆိုလို့ ၊ ဥရောပမှာငယ်ကတဲက နေတဲ့လူတွေကတော့ မသိလောက်ဘူး ၊ ရေသန့် နဲ့ လုပ်ထားတဲ့ ရေသန့် ခဲ လို မဟုတ်ဘူးလို့ ပဲ ပြောတော့မယ် ပေါက်ဖော်ရေ ။
ရေခဲတွေ ရောက်လာတာနဲ့ ၊ မဏ္ဍပ်ထဲက အစောင့်ဆီက တူ တစ်လက်ငှါးပြီး ရေခဲတုံးကြီးတွေကို ထုချေခွဲပြီး စည်ဘီယာပန့် ထည့်ထားတဲ့ ၊ ဂေါက်ထွက်မယ့် ပုံးထဲကို ရေခဲတွေ အပြည့်သိပ်ထည့်ထားရတယ် ။
ပန့် က စတီးပိုက်နဲ့ လုပ်ထားတာဆိုတော့ ၊ ၁၀မိနစ်လောက်နေတော့ တစ်ခွက် စမ်းထည့်ကြည့်လိုက်တာ ၊ အားပါး အေးစိမ့်နေတာပဲ ။ စည်ဘီယာဆိုင်က ဟာထက်တောင် သောက်ကောင်းနေသေးတယ် ။
စည်ဘီယာလဲ စရရော ၊ တန်းဈေးဦးပေါက်တာပဲ ပေါက်ကြီးရေ ။
စောနက ထမင်းကြော် ၊ ကြာဇံကြော် ဝယ်စားထားတဲ့ အဖွဲ့ တွေ တစ်ခွက်ပြီး တစ်ခွက် လာအားပေးကြတယ်ကွ ။
နေ့ လည်စာ စားချိန်ရောက်တော့ မဏ္ဍပ်ပေါ်ရှိသမျှ လူအားလုံးနီးပါး ၊ ငါတို့ ဆိုင်မှာပဲ ဝယ်စားကြရတာပေါ့ကွာ ။ ရောင်းကောင်းချက်ကတော့ အကြို နေ့ မို့ ၊ လူနဲမှာ မှတ်ပြီး ၊ တစ်ပြည်ပဲ ချက်ခဲ့တဲ့ ထမင်းကြော်အားလုံးရော ၊ ကြာဇံကြော် တစ်ဒယ်လုံးပါ ပြောင်အောင်ရောင်းရတာဟေ့ ။
ဘီယာ ၊ အရက် ၊ အချိုရည်နဲ့ မြည်းစရာတွေကတော့ တဒီးဒီးဝယ်စားသောက်ကြတာကလား ။
ညနေ ၃နာရီခွဲလောက် ရေပက်လို့ ရပြီလဲဆိုရော ၊ ရေစပက်ကြတာနဲ့၊ အရက်ဘီယာ ခဏခဏ ထပ်လာဝယ်ကြတာ နိုင်ကို မနိုင်ချင်ဘူး ။ မဏ္ဍပ်အော်ဂန်နိုက်ဇာတွေကလဲ စည်ဘီယာတွေ လာအားပေးကြတယ် ပေါက်ကြီးရေ ။ သူရို့ အတွက်ကကြတော့ ဘီလ်သီးသန့် ဖွင့်ထားပေးရတာပေါ့ ။
ညနေ မဏ္ဍပ်ပိတ်မှ ပေါင်းရှင်းပေါ့ ။
အကြိုနေ့ မှာ ဘီယာ ၄စည် ကုန်တယ်ဆိုတော့ တာထွက်ကောင်းတာပေါ့ကွာ ။
စည်က အားလုံး ၃၀ ယူထားတာလေ ။
အချုပ်ပြောရရင် အကြိုနေ့ ည၆နာရီခွဲလောက် မဏ္ဍပ်ပိတ်တာနဲ့ ၊ မောင်အောင့်အိမ်အပြန်ရောက်တော့ ပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့ ပိုက်ဆံ ထိုင်ရေတာ ၅သိန်းကျော်ဖိုးရောင်းရတဲ့ ကွ ။
ငါတို့ အားလုံး အားတက်သွားကြတာပေါ့ကွာ ။ အကြိုနေ့ တောင် ၅သိန်းကျော်ဖိုး ဆိုမှတော့ ၊ ကျန်သုံးရက်မှာ ဒီထက့်ပိုရောင်းရဖို့ ပဲ ရှိတာမို့ လား ။
အရင်းက အစားအသောက်ဖိုး က ၂၅သိန်းလောက်နဲ့ မဏ္ဍပ်ကိုပေးရတာ ၅သိန်း ဆိုတော့ ၊ သိန်း၃၀ပဲ ထားပါတော့ကွာ ။
ပထမရက် ၅သိန်း ၊ ကျန်ရက်တွေ တစ်ရက် ၁၀သိန်းဖိုးလောက်ရောင်းရရင် ရှယ်ပြီ ဆိုပြီး ငါနဲ့ မောင်အောင် နဲ့ စိတ်ကူးတွေယဉ်ပြီး ထိပ်ဖူးတွေပြင် အဲလေ ၊ ပင်ပန်းတာတွေ တစ်ဝက်လောက် သက်သာသွားတာပေါ့ကွာ ။
ပိုက်ဆံရေပြီး ခဏနားပြီးတာနဲ့နောက်နေ့ ဈေးဝယ်ရမယ့် စာရင်းတွေလုပ် ၊ တာဝန်ကိုယ်စီခွဲ ၊ ပြီးတာနဲ့ကူပေးတဲ့ ကလေးမလေးတွေနဲ့ တပည့်ကျော်ကို ပြန်ပို့ ပြီး ၊ အိမ်ကိုတန်းပြန်ရတော့တာပေါ့ကွာ ။
ပင်ပန်းချက်ကတော့ ၊ အိမ်ပြန်ရောက်လို့ ရေလေးချိုးပြီး ခုတင်ပေါ် တက်လှဲတုန်းရှိသေး ၊ တန်းအိပ်ပျော်တော့တာပဲ ပေါက်ကြီးရေ ။ တစ်ကယ်ပါ… တစ်သက်နဲ့ တစ်ကိုယ် သင်္ကြန်ဈေးရောင်းတာလောက် တစ်ခါမှ အပင်ပန်းကြီး မပင်ပန်းခဲ့ဖူးတာ တစ်ကယ်ပါကွာ ။
ဒုတိယ ရက် / အကျနေ့ 
အကျနေ့ ကြတော့ ၊ မနက်ကို ၅နာရီခွဲလောက်ထပြီး မျက်နှာသစ်ရေချိုးပြီးတာနဲ့ ၊ အိမ်ကနေ တန်းပြေးရတယ်ဟ ။ ပင်လယ်စာတွေရောင်းတဲ့ ဆိုင်က သင်္ကြန်ရက်တွေ အတွင်း မနက်ပိုင်းပဲ ဖွင့်ရောင်းတာဆိုတော့ သူ့ မှီအောင် ပြေးရတယ် ။ ငါက ပင်လယ်စာတွေ ဝယ်ဖို့ တာဝန်ယူထားတာကိုး ။ ကြက်အူချောင်းကြော်တို့ ၊ ပုဇွန်အသားလုံးတို့ ၊ ဂဏန်းအသားလုံး တို့ ၊ ကြက်ဖင်ဆီဖူး တို့ ဘာညာပေါ့ကွာ ။
အဲဒါဝယ်ပြီးတာနဲ့ မောင်အောင့်အိမ်ကိုပြေးပြီး ၊ မောင်အောင့်မိန်းမနဲ့ မောင်အောင့် အဒေါ်တို့ ကြော်ဖို့ ပေးရတာပေ့ါ ။ သူရို့ တွေခဗျာလဲ ထမင်းအိုးချက် ၊ ကြာဇံကြော်ရတာနဲ့ လုံးချာလည် ရိုက်နေကြတာပါပဲ ။
မောင်အောင် က ငါ့ကို အရက်အကောင်းတင်မလားလို့ လာတိုင်ပင်တယ် ။ အရက်အကောင်း ဘာတင်ကြမလဲ လို့ တိုင်ပင်ကြတော့ ၊ ရက်ဒ်လေဘယ်လ် လောက် ဆိုရင် မဆိုးဘူးပေါ့ ။ ဒါနဲ့ မနက်စာထွက်စားကြရင်း ၊ ရက်ဒ်လေဘယ်လ် ဝမ်းလီတာ ၂ပုလင်းဆွဲခဲ့လိုက်တယ် ။ ရောင်းရလို့ ရောင်းရငြားပေါ့ကွာ ။
အကျနေ့ ကတော့ ၇နာရီ ၄၅မိနစ်လောက် မဏ္ဍပ်ကို ရောက်ခဲ့ကြတယ် ဟ ။
ထုံးစံအတိုင်း ပြင်စရာရှိတာ ပြင်ပြီး ဈေးဦးဖောက်မယ့်လူကို မျှော်နေကြတာပေါ့ကွာ ။
ဒီနေ့ က ၊ ပိုက်ဆံပေးပြီးတက်ရတဲ့နေ့ ဆိုတော့ ၊ ဖရီးနေ့ လောက် လူလာမများတာကို သတိထားမိတယ်ဟ ။ ဒါပေသည့်လဲပေါ့လေ ။
မှတ်မှတ်ရရ ဈေးဦးက ၈နာရီခွဲ ကျော်လောက်မှ စပေါက်တယ်ဟ ။ မဏ္ဍပ်လာရေကစားမယ့် ချာတိတ်မလေးတစ်ဖွဲ့ ၊ ရေသန့် ဘူးနဲ့ အချိုရည်ဘူး နဲနဲလာဝယ်ကြတာ ။
မဏ္ဍပ်က မနက်စာအဖြစ် ကော်ဖီတစ်ခွက်စီနဲ့ ၊ ကိတ်မုန့် တစ်ခု စီ ကျွေးတာကိုး ။
ရေပက်ဖို့ရေစက်ကလဲ အဲဒီအချိန်လောက် စဖွင့်တာပဲ ။
ခဏနေကြတော့ ရေပက်ကြရင်း ရေစိုကြတော့ ၊ အသောက်ကဏ္ဍ စဖွင့်လာကြပါပြီ ။
အရက်လာဝယ်တဲ့ လူနဲ့၊ စည်ဘီယာ လာဝယ်တဲ့ လူနဲ့ ၊ အကြိုနေ့ ကလောက်တောင် မများပါဘူး ။
နောက်ပြီး ပိုက်ဆံပေးတက်ရတဲ့နေ့ ဆိုတော့ ၊ မဏ္ဍပ်ကနေ့ လည်စာ ကျွေးတာကြောင့်လဲ ပါပါရဲ့ ။
ထမင်းကြော် ၊ ကြာဇံကြော် သိပ်လာအားမပေးကြတော့ဘူး ။ ကြက်ဥမွှေကြော်တွေတော့ ရောင်းရပါတယ် ။
မဏ္ဍပ်အော်ဂန်နိုက်ဇာတွေကတော့ ထုံးစံအတိုင်း ဘီလ်မှတ်သောက်ကြတာပေါ့ ။
အော်…. ရဲ ၊ ဟုတ်တယ် ရဲတွေ မနက် တစ်လုံး ၊ နေ့ လည် တစ်လုံး ၊ ညနေ တစ်လုံး ပေးရတယ် ။ သူတို့ တွေက လာတောင်းတာ ။ ငါတို့ ကလဲ လာတောင်းမှာမှန်းသိလို့ ကို ၊ အရက်အပေါစား ၁၂ပက် ပုလင်းတွေ ဆောင်ထားရတယ် ။ မဏ္ဍပ်မှာတော့ ၁၂ပက်ပုလင်း မရောင်းပါဘူးကွာ ။ ရဲတွေကို အမြည်းအဖြစ်ပေးတာကတော့ ၊ ရယ်ဒီမိတ် အာလူးကြော်ပေါ့ကွာ ။
ဘာလို့ ပေးရလဲ ဆိုတော့ ၊ မင်းသိတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့ကွာ ၊ စကားများများမပြောရင် အမောသက်သာတာပ ။ ဟားးး
ငါတို့ ဈေးရောင်းတဲ့ တစ်ဖွဲ့ လုံး တစ်နေကုန် မတ်တပ်ရပ်နေရတာ များပါတယ်ကွာ ။ ပင်ပန်းတာကတော့ တော်တော်ပင်ပန်းတယ်ဟ ။
ညနေစောင်းတဲ့အထိ ၊ ထမင်းကြော် ၊ ကြာဇံကြော်တွေက တစ်ဝက်လောက် ကျန်သေးတယ် ။
ကျန်တဲ့ ပင်လယ်စာအကြော်လေးတွေနဲ့ ကြက်ဖင်ဆီဖူးတွေကတော့ ရောင်းရပါရဲ့ ။ စည်ဘီယာလဲ သိပ်မရောင်းရဘူး ။ ထမင်းကြော်နဲ့ ကြာဇံကြော် ကျန်တာတွေကို မဏ္ဍပ်ညစောင့်တွေကို အလှူပေးခဲ့မယ် လုပ်တုန်း ၊ အော်ဂန်နိုက်ဇာတွေက သူတို့ အစောင့်တွေကို ညစာကျွေးဖို့ ၊ အိုးကျန်သမျှ ကို တစ်အိုး ၅၀၀၀ကျပ်နဲ့ လာဖြတ်ဝယ်သွားလို့ ၊ တစ်သောင်းကျပ် ပလက်ထွက်လိုက်သေးတယ် ။
ဒီနေ့၂စည်ခွဲလောက်ပဲ ကုန်တယ် ။
အကျနေ့ ကတော့ ဖရီးပေးတက်တဲ့ အကြိုနေ့ လောက်တောင် ရောင်းမကောင်းတာ အမှန်ပဲ ။
ညအပြန် ပိုက်ဆံရေကြတော့ ထင်တဲ့အတိုင်းပါပဲ ။ ၃သိန်းပြည့်တယ် ဆိုရုံလေး ရတာကို တွေ့ ရတယ် ။ အဲ့မှာ ငါနဲ့ မောင်အောင်လဲ စိတ်တော့ပျက်သွားကြတာပေါ့ ။
၂ရက်ရောင်းတာ ၈သိန်း ၊ အရင်းက ၃၀သိန်း ဆိုတော့ ၊ ကျန်တာက ၂ရက်ထဲကျန်တော့တာကွာ ၊ အရင်းတောင် ရပါ့မလား ဆိုပြီး မျက်ခုံးစလှုပ်ကြပြီပေါ့ ။
တတိယနေ့ /အကြတ်နေ့ 
သည်နေ့ လဲ ထုံးစံအတိုင်းပဲပေ့ါကွာ…
မနက်၅နာရီခွဲထ ၊ ဈေးဝယ်သွား ၊ ချက်ပြုတ်ကျော်လှော် ၊ လူတွေကတော့ ဖလက်တော်တော်ပြချင်နေပြီ ။
မဏ္ဍပ်ရောက်တော့ အော်ဂန်နိုက်ဇာ တွေ က
“အရောင်းအဝယ် ကောင်းလား လာမေးတော့တောင် ၊ ဖြေရတာ အားမရှိချင်ဘူး”
ဒီနေ့ တစ်ခုရှိတာက ၊ မဏ္ဍပ်မှာ နေ့ လည်စာ ကျွေးတော့ ၊ ထမင်းကြော်လာပို့ တဲ့ ဆီက ၊ မလုပ်တတ် လုပ်တတ်နဲ့ လုပ်ရောင်းတာမို့ ထင်ပါတယ် ။ ထမင်းကြော်တွေက သိုးနေတယ်ဟ ။
ဒါနဲ့ တစ်မဏ္ဍပ်လုံး ငါတို့ ဆိုင်လေးမှာပဲ ဝိုင်းပြုံလာကြလို့၊ နေ့ လည်၁နာရီလောက်မှာ စားစရာ ရောင်းစရာမရှိအောင် ကို ပြတ်သွားခဲ့တယ်ဟ ။
အဲဒါနဲ့ မဏ္ဍပ်မှာတင် မီးမွှေးပြီး အကြော်လေးတွေ ကြော်ရတာပေါ့ ။
အရေးထဲ မူတူးတွေရဲ့ ရစ်တာကိုလဲ ခဏခဏခံရသေးတယ် ။
ပိုက်ဆံမပေးရသေးပဲ ပေးပြီးပါပြီ ဆိုပြီး မိုက်ကြေးခွဲတဲ့ ချာတိတ်တွေကလဲ လာတယ် ။
မလှူတတ် ဈေးရောင်းဆိုသလို ပဲ သဘောထားလိုက်ရတာပေါ့ကွာ ။
ကိုယ်က အရက်ဘီယာရောင်းတာဆိုတော့ လူမိုက်လုပ်နေလို့ မရဘူးလေ ငါ့ကောင်ရာ ။
ရဲကတော့ ထုံးစံအတိုင်း တစ်နေ့ သုံးကြိမ် လာတောင်းစမြဲပဲ ။
ဒီနေ့၆စည်နီးပါးတော့ ကုန်တယ်ကွာ ။
ဒီနေ့ ည ၊ မောင်အောင့် အိမ်ရောက်တော့ ခြေထောက်တွေ အရမ်းတောင့်နေပြီကွ ။ ပိုက်ဆံတောင် မရေနိုင်တော့ဘူး ။ ကလေးမလေးနှစ်ယောက်နဲ့ တပည့်ကျော် ကို ရေခိုင်းတာ ၊ ၈သိန်းခွဲလောက်ရတယ်တဲ့ ။
အားလုံး ၁၆သိန်းရပြီဆိုတော့ ၊ အရင်းရဖို့ ၁၄သိန်း လိုသေးတာပေါ့ကွာ ။
နက်ဖန် ရောင်းကြေးက ၁၄သိန်း ပြည့်ပါ့မလား ဆိုတာ ကိုပဲ ငါတို့ စိတ်ပူနေခဲ့ကြရတယ် ပေါက်ကြီးရေ ။ လူတွေလဲ ပင်ပန်းလှပေါ့ ။
ငါ့ကို ကူညီဖို့ လာတဲ့ ကလေးမ၂ယောက်ထဲက ၁ယောက် ဖျားတယ်ကွာ ။ မောင်အောင့် မိန်းမလဲ ဖျားသွားတယ် ။
နောက်ဆုံးနေ့ / အတက်နေ့ 
ဒီနေ့ မနက် ဈေးဝယ်သာထွက်ရတယ် ၊ စိတ်ထဲမှာတော့ သိပ်အားမရှိလှဘူး ။ မမြတ်ရင်နေပါစေ ၊ ရှုံးတော့ မရှုံးချင်ဘူးလေကွာ ။ လူတွေလဲ ပန်းလှရောပေါ့ ။
ပင်ပန်းတာနဲ့ တင် အလုပ်ကို လုပ်ချင်စိတ် ပျောက်ရတယ် ငါ့ရောင်ရေ ။
ဒါပေသည့် အရင်းရဖို့ အရေး ဆိုပြီး ဇွတ်အားတင်းရတာပ ။
ဒီနေ့ ကတော့ မဏ္ဍပ်ကို မနက်၇နာရီလောက်ကတဲ က ရောက်တယ် ငါ့ရောင်ရေ ။
အဲ…ရေကစားမယ့်လူတွေလဲ ၈နာရီ မထိုးခင်လောက်ကို ရောက်လာကြတယ်ကွ ။
နောက်ဆုံးနေ့ ဆိုတော့ ၊ သူတို့ တွေလဲ အပြတ်ကဲကြမယ့် ပုံပဲ ။
နောက်ဆုံးနေ့ မှ ပထမဆုံး ဈေးဦးပေါက်ဝယ်တာက ချာတိတ်လေးတွေဗျ ။
မဏ္ဍပ်ထဲ ဝင်ဝင်ချင်း ၊ ငါတို့ ဆိုင်ကို တန်းလာပြီး ၊ အရက်၆ပက်ပြားကို အချိုရည်ဘူးတွေနဲ့ စပ်သွားကြတယ် ။ အမြည်းတွေလဲ ဝယ်သွားကြတယ် ။
ငါကတော့ ငါရောင်းတဲ့ စည်ဘီယာလေးကို ကော်ဖီထည့်တဲ့ တစ်ခါသုံးခွက်လေးနဲ့ တစ်ခွက်ချင်း သောက်ရင်း ပင်ပန်းထားတာလေးတွေကို စိတ်ဖြေနေရတယ်။
အဲမကြာလိုက်ပါဘူး ။ ဆက်တိုက်ဆိုသလို ဈေးဝယ်တဲ့ လူတွေကြလာချက် ၊ ၄၅မိနစ်လောက်ကို တစ်စည် အသစ်လဲရတယ် ။ အမြည်းတွေလဲ အားပေးကြတယ် ။ နောက်ဆုံးနေ့ ဆိုတော့ ၊ ချာတိတ်လေးတွေရော ၊ ချာတိတ်မလေးတွေပါ အသားကုန်သောက်စားကြတာဟေ့ ။ တစ်ချို့ ဆိုရင်၊ နေ့ လည်၁၂ ထမင်းစားနားချိန်ရှိသေးတယ် ၊ မှောက်တဲ့လူက မှောက်နေတယ် ။
မောင်အောင့် မျက်နှာကြည့်တော့ အခြေအနေမဆိုးပါဘူး ဆိုတဲ့ မျက်နှာထားမျိုး လုပ်ပြတယ် ။
စည်ဘီယာ အသစ်တွေကို ရေကြည့်တော့ ၁၀စည်ကျန်နေသေးတယ် ။
နေ့ လည် ၁နာရီ ရေပြန်စပက်တာနဲ့၊ အသောက်သမားတွေ ထပ်ထပ်တိုးလာတယ် ။
ငါနဲ့ မောင်အောင်ရယ် ၊ မောင်အောင့်အဒေါ်ရယ် ၊ ငါ့ကလေးမလေးရယ် ၊ ငါ့တပည့်ကျော်ရယ် နားချိန်ကို မရှိအောင် ဆက်တိုက်အလုပ်များတော့တာပေါ့ကွာ ။ ပိုက်ဆံ ဘယ်လောက်ရနေပြီလဲ ဆိုတာလဲ မစဉ်းစားရဲဘူး ။
မဏ္ဍပ်အော်ဂန်နိုက်ဇာတွေကလဲ နောက်ဆုံးနေ့ ဆိုတော့ မူးတိန်နေအောင် သောက်ကြတယ် ။
နောက်ဆုံးနေ့ ဆိုတော့ ၊ ည၆နာရီခွဲကျော်လောက်မှ မဏ္ဍပ်ရေစက်ပိတ်တယ် ။
ငါတို့ လဲ သိမ်းစရာရှိတာလေးတွေ သိမ်း ပြီး ၊ ပြန်ဖို့ ကားခေါ် တော့ ည၈နာရီ ထိုးပြီ ။
စည်အသစ်ဘယ်လောက် ကျန်သေးလဲ ရေကြည့်တော့ ၇စည် ကျန်သေးတယ် ။
ဒါနဲ့ စည်ဘီယာရုံးကို နောက်နေ့ လက်ကျန် စည်ဘီယာတွေနဲ့ စည်ခွံတွေ လာသယ်ဖို့ ဖုန်းဆက်ပြီး ၊ ငါတို့ ပြန်ခဲ့ကြတာပေါ့ကွာ ။
မောင်အောင့် အိမ်ရောက်တော့ လူက နဲနဲမှကို မလှုပ်နိုင်တော့ဘူး ။ ပိုက်ဆံကို ကျန်တဲ့ လူတွေ ရေခိုင်းပြီး ငါနဲ့ မောင်အောင် နဲ့ ကားသမားနဲ့ ထိုင်နေကြတာပေါ့ ။
ကားသမား ကို ကားခရှင်းပေးမယ် လုပ်တော့ ၊ ငါက ပြောခဲ့တဲ့ အတိုင်း ၅သောင်း ထုတ်ပေးလိုက်တာပေါ့ကွာ ။ အဲဒီမှာ မှ နားလည်မှု လွဲတာကို သိရတော့တာပဲ ပေါက်ကြီးရေ ။
သူပြောခဲ့တဲ့ ငါးသောင်းဆိုတာ တစ်ရက်ကို ငါးသောင်းတဲ့ ။
ငါက ထင်တာ ၄ရက်လုံးမှ ငါးသောင်းထင်ပြီး ငှားခဲ့တာကိုးကွ ။
တစ်ခုကံကောင်းတာ ၊ ကားသမားက ငါ့ဘော်ဒါဖြစ်နေတာနဲ့ ၊ နားလည်မှု လွဲလို့ ပါ ကိုကြီးရယ် ၊ တစ်သိန်းပဲ ယူလိုက်ပါ လို့ တောင်းပန်လိုက်တာ ကျေနပ်သွားပါတယ် ။
ပိုက်ဆံရေနေတဲ့ လူတွေ အော်လာတယ် ။
နောက်ဆုံးနေ့ ရောင်းရငွေကို ရေတာ ၂၂သိန်းရလို့ တဲ့….
အဲဒါနဲ့ငါနဲ့မောင်အောင်နဲ့ လဲ ထခုန်ကြတဲ့အထိ ပျော်မိတယ် ။
အားလုံး ၃၈သိန်း ရလိုက်တာကိုးကွ ။
အဲဒါကတော့ သင်္ကြန်အတွင်း ငါဈေးရောင်းခဲ့တဲ့ အဖြစ်လေးတွေပေါ့ ပေါက်ကြီးရာ
စာရင်းချုပ်တော့ ၊ ကားခ၁သိန်းရယ် ၊ ၄ရက်လုံးကူပေးတဲ့ လူတွေကို တစ်ယောက် ငါးသောင်းပေးတာရယ်နဲ့ နုတ်လိုက်ရင် ၊ ငါနဲ့ မောင်အောင် တစ်ယောက် ဘယ်လောက်မှ မကျန်ဘူးပေါ့ ။ မြတ်တော့မြတ်တယ် ။ နဲတယ် ။ ပင်ပန်းတာကတော့ အရမ်းပင်ပန်းတယ် ။
ရဲ ကို အရက်ပုလင်း ပေးရတယ် ။
မူးယစ်တွေ ရဲ့ စပါရှယ် ယစ်တာကို ခံရတယ်
မိုက်ကြေးခွဲချင်တဲ့ကောင်တွေ ရဲ့ မိုက်ကြေးခွဲတာကိုလဲ ခံရသေးတယ် ။
ငါထင်ပါတယ် ပေါက်ဖော်ရာ ၊ သင်္ကြန်ရက်တွင်း မဏ္ဍပ်မှာ ဈေးရောင်းတယ်ဆိုတာ ၊ ဘယ်လောက်ပဲ စေ့စပ်နေအောင် ဒေါင့်စေ့နေအောင် ရောင်းရောင်း အမြတ်ငွေက ၁၀သိန်းထက် မပိုလောက်ပါဘူး ။
အခုနှစ်တွေ ဆိုရင် ၊ မဏ္ဍပ်မှာ ဈေးရောင်းရဖို့ ပေးရမယ့် ငွေကိုက သိန်း၂၀ နဲ့ အထက် ဆိုတော့ ၊ မင်းတွက်သာကြည့်တော့ ငါ့ရောင်ရေ ။
ငါလဲ မောပြီကွာ ။
မနက်ဖန် ငါ မေမြို့ ဘက်မှာ ရိပ်သာဝင်တော့မယ် မောင်ရေ
ဒီနှစ်သင်္ကြန်တော့ တရားအားထုတ်ရင်း နှစ်ဟောင်းက အညစ်အကြေးတွေကို ဆေးကြောတော့မယ် ။
မင်းလဲ ဒီသင်္ကြန် မှာ အေးအေးချမ်းချမ်း နဲ့ ကျန်းမာ ပျော်ရွှင်ပါစေ လို့ငါဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် ။
မန်းဂေဇက် ကို စာလာဖတ်ကြတဲ့ စာဖတ်သူအားလုံး
သဂျီးတို့ မိသားစု နဲ့ 
မန်းဂေဇက် ပက်ဘလစ်ရှာအဖွဲ့ အားလုံးလဲ
နှစ်ကူးကို စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နဲ့ သာသာယာယာဖြစ်ကြပါစေလို့ 
“““ အဲဒါ… အဲဒါ… ”””
******* အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ******* (Word count: 1580)
နင်တကယ်ရောင်းမှပဲ ငါလဲမောသွားတာပဲ။ နင်နဲ့လိုက်ဝယ်ချမ်း ချက်ပြုတ် ရောင်း ငွေရီနဲ့ ဖတ်ဖတ် ကို မောကရောဟေ။ မြတ်ပါ့မလားလဲပူရသေး။ တော်ပီအေ။ နောက်နှစ်မရောင်းနဲ့တော့။ ပိုစ့်တွေဖတ်ပီး မောနေရအုံးမယ်အေ။
ရန်ကုန်မှာတော မန္တလေးကထက်ပိုမြတ်မယ်ထင်ပါတယ် ။
ဈေးသည်ကြီး ဦးပေလည်း တရားအားထုတ်ပြီး
နှစ်တိုင်း သင်္ကြန်မဏ္ဍပ်မှာ အလုပ်နဲ့ရောက်နေတော့
ရောင်းလဲရောင်းရပါရဲ့  ရစ်လဲ အရစ်ခံရပါ
အဲ မမြတ်ဘူးဆိုတာလဲ မရှိဘူးနော်။
ကျနော်တို့လဲ သင်္ကြန်မဏ္ဍပ်ရောင်းမယ့် ဆိုင်ကို အကြွေးပေးထားရင် နောက်ဆုံးရောက်တာနဲ့
ရ်ိပ်သာမှယ ညစာ ခိုးရောင်းမနဲ့အုံး ဘူဇွာလက်သစ် အမြတ်ကြီးစား အရင်းရှင်ပေါက်စ ကပေရေ…
၁၀၀၀၀ ရင်းပီး ၁၅ ရက်အတွင်း သိန်း ၅၀ ရနည်းတို့
မိးနစ် ၉၀ အတွင်း စီးပွားရှာနည်းတို့ လုပ်ပါ့ဦး……………………….
ရန်ကုန် ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းပေါ်မှာ မဏ္ဍပ်ထောင်ဖူးတယ်…
အဲသည့်ခေတ်တုံးက စီးပွါးဖြစ်မဟုတ်၊ အပျော်သက်သက်လေ…
ရန်ဖြစ်ကြတာလည်း ခြိမ့်ခြိမ့်သဲ… အား ဟိ လွမ်းလိုက်တာ…
ဒို့လည်း ၁၅၀၀ တန်ဆင်းကဒ်ရောင်းရမယ်
ဒို့ပေဂျီး ဒီသင်္ကြန် ရိပ်သာဝင်မှာပဲ ..
သာဒု ပါ .. သာဒု ပါ …
ခညားဂ အတက်လည်း ကြီးပြီ ဆိုတော့ ဝင်သင့်ပါတယ် …
ဒါနဲ့ .. ကြောင်ပိုက်ပြီး မဝင်ချင်ဘူးလားလို့ …
ကောင်းလိုက်တဲ့ စီးပွားရေးဗျာ..သူများတွေ ကဲဖြုန်းနေတဲ့ အချိန်..ဒီဆရာလေးက..အချိန်ကို ကောင်းကောင်းအသုံးချ..ပိုက်စံရှာ